Sidee dib ugu heleysaa boggaga internetka ee u shaqeeya SEO?
Xiriirada soo socda ee (soo socda) ee soo socda, ama dhabarka, ayaa ah xidhiidhada saddexaad ee isha ku tilmaamaya boggaaga ama blog-kaaga. Maxay muhiim u tahay in la fahmo sidii dib loogu soo celin lahaa boggaaga? Sababtoo ah backlinks ayaa haatan lagu arkaa sadexda asbuuc ee Google ee asaasiga ah, sida laga soo xigtay farriinta rasmiga ah ee ay bixiyeen madaxda sare ee shirkadda weyn ee raadinta ee sanadkan horaantii sanadkan. Marka laga reebo fikradda guud ee Raadinta Mashiinka Raadinta, dib u eegis ayaa loo ogaan karaa codadka kalsoonida - Mawduucaagu wuxuu leeyahay qiime aad u wanaagsan. Sidaa darteed dhammaan shabakada internetka ama blogka ayaa lagu kalsoonaan karaa. Habkaa, mashiinka raadinta Google wuxuu sameeyaa qiimeyn PageRank-ka ah - miisaan kasta oo gadaal laga helo bog kasta oo shabakadda internetka ah. Fahmida muhiimadda dhismaha xiriirka dabiiciga ah iyo tayada hoose, waxaan hoosta ku eegayaa sidii aad dib ugu heli lahayd boggaaga ama blogka dhab ahaantii u shaqeynaya SEO, ugu dambeyntii - si aad u heshid meel ka mid ah 10ka natiijooyinka raadinta Google. Sida loo helo bogoggaaga boggaga ujeedooyinka SEO
Marka ay timaaddo abuurista xiriirka SEO-saaxiibtinimo, wax walba oo ku saabsan dhabarka ayaa muhiim u ah - ka bilaabma macaamilada shakhsiyadeed ee kugula xidhiidhaya adiga iyo darajadaada u gaarka ah ee u gaarka ah, tixgelin kasta oo isku xirnaanta, iyo sidoo kale habka boggeeda bogga. Halkaan waa sida aad dib ugu heli lahayd boggaga internetka habka saxda ah - hubi inaad haysatid wax kasta oo meel ku habboon tixgelinta qodobbada soo socda:
Tirinta tixraaca wareejinta ee leh xidhiidhada adiga ku tilmaamaya inay tahay mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee indhaha ah ee Google, marka ay timaaddo fursadaha helitaanka liiska guud ee xiriirkaaga xiriirka.
Xiriiriyaha deeq-bixiyaha - labadaba heer shakhsi ah (oo lagu tiriyo bog kasta oo bog leh), iyo marka la qaadayo qiyaasta. Waxay micnaheedu tahay in haysashada dhowr tayo oo tayo sare leh oo leh hey'ad weyn oo ka sii wanaagsan, halkii ay ku qanci lahaayeen tiradooda iyo wax kale.
Awoodda aadka loo tixgelinayo macnaheedu maaha inay tahay wax walba oo ku saabsan website-yada warbaahineed ee caalamiga ah ama daabacaadaha adduunka ugu weyn - website-kaaga ganacsiga yar yar ama shabakadda internetka ee yaryar waxay gaari kartaa horumar buuxa leh.
Da'da Domain ayaa mararka qaarkood loo tirin karaa arrin aad u muhiim ah, iyada oo qayb ka dhigaysa awoodda shabakadda ee ku saabsan dib-u-hagaajinta ujeedooyinka SEo. Fiiro gaar ah, si kastaba ha ahaatee, inaad khasab kuguma aha inaad xiriir la sameyso ilaha domainka oo keliya.
Dib-u-tixraaca khuseeya maaha kaliya qiimo badan oo Google ah, halkii ay ka iman lahaayeen kuwa saxda ah ee ku lug leh mawduuca mawduuca, ama ganacsiga u dhigma. Xaqiiqdii, in aan lahaan karin dib u qabsashad aan la xariirin sidoo kale waxaa lagu turjumayaa matoorka raadinta sida shakiga ama xakamaynta shakiga ah - taas awgeed waxaad ku kasban kartaa naftaada daran (mararka qaarkood xitaa aan lumin karin).
Iskudubnaanta kala duwanaanshuhu waa inaan waligood la dhicin. Ha ka waaban inaad xiriir la leedahay bogag internet oo qarsoodi ah ama blogyo leh awood kala duwan, kalsooni, PageRank, iyo waxyaabo kale oo la xiriira. Dhab ahaantii, taasi waxay noqon kartaa go'aankaaga ugu wanaagsan ee aad sameysey - sida maadama Google ay si aad ah ugu kalsoon tahay dib u qurxinta midabada leh qiimo kala duwan, laga yaabo inay qirato habka dabiiciga ah ee abuurista Source .